» स्टेजमै भावुक भए गायक प्रकाश सपुत (भिडियो)
स्टेजमै भावुक भए गायक प्रकाश सपुत (भिडियो)
११ असार २०७६, बुधबार १६:२७
हेटौँडा, ११ असार । चर्चित गायक प्रकाश सपुतको चर्चित गीतहरुलाई दर्शकहरुले निकै रुचाएका छन् । गीतसँगै अब्बल कलाकारिता र निर्देशन क्षमता भएका उनले तयार पारेका भिडियोहरु सबैको रोजाई समेत बनेका छन् । उनै प्रकाशले केही समयअघि ‘गलबन्दी’ बोलको बहुचर्चित गीत बजारमा ल्याए । उक्त गीतलाई दर्शकले यति मन पराए कि त्यस गीतको भिडियोका हरेक डाईलगहरु सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भए । तर गीत भाईरल भएकै बेला लोक भाकाको लय मिलेको भन्दै गायक शम्भु राईले उनलाई गीत कपिको आरोप समेत लगाए ।
उनलाई आरोप लगाउन सुरु भएकै समयमा प्रकाश सपुत हेटौँडाको एक कार्यक्रममा आएका थिए । न्यू मिडिया एकेडेमीले आयोजना गरेको ‘दोस्रो हेटौँडा जर्नालिजम अवार्ड’ मा स्टेज प्रस्तुतिका लागि आएका उनी एकैछिन् स्टेजमा भावुक समेत बने । तर उनी गीतको कपिराईटको कुरालाई लिएर भने भावुक भएका होईनन् । उनले आफ्नो करियरकै बहुचर्चित गीत ‘बोल माया’ लाई फेरि एकपटक स्टेजमा प्रस्तुत गरे । गीतको भावसँगै डुब्दा उनी भावुक समेत भए । हेर्नुहोस् उनको यो भिडियो–
यस कारण फिल्म खेल्न चाहान्नन् मिस नेपाल
दिपिका महाभारतकी द्रौपदी, कृष्णको रोलमा आमिर खान
बलिउडकी चर्चित नायिका दिपिका पादुकोनलाई महाभारतकी द्रौपदीको रोलमा चयन गरिएको छ भने कृष्णको रोल बलिउडका मिस्टर परफेक्टनिस आमिर खानले निभाउने भएका छन् । ‘ठग अफ हिन्दूस्तान’ को सुटिङ सकिएपछि सुरु गर्न थालिएको आमिरको ड्रिम प्रोजेक्ट ‘महाभारत’ मा दिपिका यो रोलको लागि नेचुरल चोइसका रुपमा दिपिकालाई लिइएको हो तर पध्मावत जस्ता एपिक फिल्म गरेकी र यसको विवादमा रुमलिएकी दिपिकाले स्विकार गर्लिन् वा नगर्लिन त्यो भने तय भइसकेको छैन । यदि उनी यस रोलका लागि तयार भएमा दिपिका र आमिरको यो पहिलो स्क्रिन सेयर गरिएको चलचित्र बन्ने छ । चलचित्रमा रिलायन्श इन्डस्ट्रिका मालिक मुकेश अम्बानीले १०० करोडको लगानी गर्ने छन् भने उनी महाभारतको को–पो्रड्यूसर पनि हुने भएका छन् । भारतीय न्यूज एजेन्सीहरुका रिपोर्ट अनुसार आमिरको महाभारत एक फिल्म नभएर ५ सिरिजमा बन्ने बताइएको छ ।
सन्नी लियोनी सधैँ फिट देखिनुको रहस्य यस्तो
फेसन र ग्ल्यामरका कारण चर्चामा रहन सफल बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी सधैँ फिट रहने कारण के होला ? उनको जस्तै स्लिम फिगर बनाउन कति युवतीहरुलाई रहर होला ? यसको कारण जान्न उनको दिनचर्याले बुझेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । सन्नी आफ्नो फिटनेशमा हमेसा ध्यान दिने गर्दछिन् । हाल उनी आफ्नो बडी परफेक्ट बनाउन जमेर वर्कआउट गरिरहेकी बताइएको छ । पछिल्लो केही दिनयता उनले जिममा वर्क आउट गरेको केही भिडियो समेत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
चर्चित गायिका रिहानाले स्न्याप च्याटको आलोचना गर्दै जारी गरेको वक्तव्यका कारण कम्पनीले ८३ अर्ब रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्नु परेको छ । उनको आलोचनात्मक वक्तव्यका कारण कम्पनीको शेयर मार्केटमा ४ प्रतिशतले घटेको थियो । जसको कारण कम्पनीको बजार मूल्यमा ८० करोड डलर ह्रास आएको थियो । स्न्यापच्याटमा एउटा विज्ञापन देखिएको थियो जसमा प्रयोगकर्तालाई ‘रिहानालाई थप्पड हान्ने’ वा ‘क्रिस ब्राउनलाई मुक्का हान्ने’ दुई विकल्प प्रदान गरिएको थियो । सन् २००९ मा प्रेमसम्बन्धमा रहेका बेला ब्राउनले रिहानामाथि हातपात गरेका थिए । लगत्तै रिहानाले आफ्नो इन्सटाग्राम एकाउन्टमा स्न्यापच्याटको उक्त विज्ञापनको आलोचना गरेकी थिइन् ।
एक मिनेट कम्मर मर्काएपछि एक करोड तलब
चर्चित बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा हलिउडमा समेत व्यस्त नायिकामा पर्छिन् । उनी कहिलेकाहीँ मात्र भारत आउँछिन् र केही दिन बसेर फेरि अमेरिका फर्किन्छिन् । भारत बसाईका क्रममा हुने कार्यक्रममा प्रस्तुति दिए बापत प्रियंकाले लिने गरेको पारिश्रमिक सुनेर तपाईलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ । उनले कम्तिमा पनि एक मिनेट प्रस्तुति दिएको एक करोड भारतीय रुपैयाँ लिने गरेकी छिन् । केही समय अघि भएको जि सिने अवार्डमा पर्फम गर्ने निश्चित भएपछि उक्त कार्यक्रममा उनले पाँच मिनेट नृत्यका लागि ५ करोड भारु लिएकी थिइन् ।